Soo dejisan Greenshot 1.2.10.6 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaScreenshotsGreenshot
Bogga rasmiga ah: Greenshot
Greenshot – waa barnaamij wax ku ool ah oo awood leh oo loogu talagalay shaashadaha. Barnaamijku wuxuu qabsan karaa shaashad buuxda, daaqada firfircoon ama shey gaar ah, aag aan rasmi ahayn, daaqad la soo dhaafay iyo shabakado internet oo buuxa oo laga furay Internet Explorer. Greenshot waxaa ku jira tifaftiraha muuqaal-dhajinta si loo baddalo xuduudaha sawirada aasaasiga ah iyo ku dar iyaga sheyga garaafyada, qoraalada, calaamadaha, qoraalka, iwm. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku kaydiso shaashadda qaababka muuqaalka sawirrada ah waxayna u diraan inay daabacaan, inay email u diraan, ama la wadaagaan Picasa, Imgur, Flickr. Sidoo kale Greenshot waxay awood u leedahay in la isku hagaajiyo qalabka kuleylka iyo goobaha kale ee qabashada.
Qaababka qabashada sawirada kala duwan
Tifaftiraha muuqaalka sawirka ah
Taageero loogu talagalay qaababka qaababka casriga ah
Dejinta fursadaha qabashada
Soo dejisan Greenshot
Faallo ku saabsan Greenshot
Greenshot Xirfadaha la xiriira
Fotosizer – softiweer loogu talagalay isku-darka ururinta iyo beddelaadda feylasha sawirrada. Software wuxuu awood u siinayaa inuu hagaajiyo tayada sawirka, cabirka iyo xulashooyinka kale inta lagu gudajiro faylasha.